သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သေရာပါ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကြောင့် မျက်ရည်တောင် ဝဲမိတယ်ဆိုတဲ့ Sinon Loresca – Cele Oscar
တစ်​ကမ္ဘာလုံးက Catwalk King လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ရလောက်တဲ့အထိ အရည်အချင်း ရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် LGBT မော်ဒယ် Sinon Loresca ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို အရမ်းချစ်​ပြီး သူ့ရဲ့ဒုတိယ​မြောက်​ မိခင် ​နိုင်​ငံလို့​တောင်​ ​​ပြော​လေ့ရှိသူတစ်​ဦးပါ။ Sinon က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်နေခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၁) နှစ်တာ အချိန်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုး များအတွက် မေတ္တာတွေကို ပေးစွမ်းနေသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ကလည်း နူညံ့ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင် Sinon ကို ကိုယ့်လူမျိုးသွေးသားတစ်ယောက်လို ချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ်။
စိတ်ထားကောင်းပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ Sinon ကို မြန်မာပရိသတ် တွေက ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ တစ်ချို့ပရိသတ်တွေ ဆိုရင် သေရာပါတဲ့အထိ ဆေးမင်ကြောင်တက်တူးတွေထိုးပြီး အားပေးဝန်းရံကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း Sinon က “မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း တတိယမြောက် ကျွန်နော်၏ မျက်နှာပုံ သေရာ ပါတက်တူး ထိုးထားသော ချစ်ရသော ပရိတ်သတ် ကို ကျန်နော် အရမ်းလေးစား ပြီး ဂုဏ်ယူပြီး မျက်ရည် ဝဲ မိပါတယ်။ ကျေးဇူးအရမ်း တင်ပြီး လေးစားလျက်. ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သေရာပါဆေးမင်ကြောင်ထိုးပေးတဲ့ တတိယမြောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကြောင့် မျက်ရည်တောင် ဝဲမိတဲ့အထိ ဝမ်းသာနေရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာတွေပေးလို့ မေတ္တာတွေပြန်ရတဲ့ Sinon ရဲ့အဖြစ်က အားကျစရာပါပဲနော်။ ဖတ်ရှု ပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
တဈ​ကမ်ဘာလုံးက Catwalk King လို့ တငျစားချေါဝျေါရလောကျတဲ့အထိ အရညျအခငျြး ရှိတဲ့ ဖိလဈပိုငျ LGBT မျောဒယျ Sinon Loresca ကတော့ မွနျမာနိုငျငံ ကို အရမျးခဈြ​ပွီး သူ့ရဲ့ဒုတိယ​မွောကျ​ မိခငျ ​နိုငျ​ငံလို့​တောငျ​ ​​ပွော​လရှေိ့သူတဈ​ဦးပါ။ Sinon က မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွခေနြထေိုငျနခေဲ့တာ အခုဆိုရငျ (၁) နှဈတာ အခြိနျကို ရောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး မွနျမာလူမြိုး မြားအတှကျ မတ်ေတာတှကေို ပေးစှမျးနသေူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှေ ကလညျး နူညံ့ပွီး ကွငျနာတတျတဲ့ နှလုံးသားပိုငျရှငျ Sinon ကို ကိုယျ့လူမြိုးသှေးသားတဈယောကျလို ခဈြခငျအားပေးကွပါတယျ။
စိတျထားကောငျးပွီး ကွငျနာတတျတဲ့ Sinon ကို မွနျမာပရိသတျ တှကေ ခဈြလှနျးအားကွီးလို့ တဈခြို့ပရိသတျတှေ ဆိုရငျ သရောပါတဲ့အထိ ဆေးမငျကွောငျတကျတူးတှထေိုးပွီး အားပေးဝနျးရံကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး Sinon က “မွနျမာနိုငျငံ အတှငျး တတိယမွောကျ ကြှနျနျော၏ မကျြနှာပုံ သရော ပါတကျတူး ထိုးထားသော ခဈြရသော ပရိတျသတျ ကို ကနျြနျော အရမျးလေးစား ပွီး ဂုဏျယူပွီး မကျြရညျ ဝဲ မိပါတယျ။ ကြေးဇူးအရမျး တငျပွီး လေးစားလကျြ. ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောလာပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ပုံတူကို သရောပါဆေးမငျကွောငျထိုးပေးတဲ့ တတိယမွောကျ မွနျမာနိုငျငံသားကွောငျ့ မကျြရညျတောငျ ဝဲမိတဲ့အထိ ဝမျးသာနရှောတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မတ်ေတာတှပေေးလို့ မတ်ေတာတှပွေနျရတဲ့ Sinon ရဲ့အဖွဈက အားကစြရာပါပဲနျော။ ဖတျရှု ပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။